Iindaba -Uzithoba njani iindleko zeMveliso yePCB?
Kulo nyaka, ochatshazelwe ngubhubhane wesithsaba esitsha, ukuhanjiswa kwezinto ezibonakalayo zePCB akwanele, kwaye amaxabiso ezinto ezingafunekiyo nawo ayenyuka. Amashishini anxulumene ne-PCB nawo achaphazeleke kakhulu. Kwinkqubela phambili yesiqhelo yeprojekthi, iinjineli kufuneka ziqwalasele ukwanelisa uyilo ukunciphisa iindleko zePCB. Ke, zeziphi izinto ezichaphazela iindleko zokuvelisa ze-PCB?
Imiba ephambili ifuthe iindleko zakho PCB
1. Ubungakanani bePCB kunye nobungakanani
Kulula ukuqonda ukuba ubungakanani kunye nobungakanani buya kuchaphazela njani iindleko zePCB, ubungakanani kunye nobungakanani obuza kudla izinto ezingaphezulu.
2. Iindidi zezixhobo ze-substrate ezisetyenzisiweyo
Ezinye izinto ezizodwa ezisetyenziswa kwindawo ethile yokusebenza zinokubiza kakhulu kunezinto eziqhelekileyo.ukuthambisa iiBhodi zeeSekethi eziPrintiweyo kuxhomekeke kwizinto ezininzi ezisekwe kwisicelo, ezilawulwa ubukhulu becala kukuhamba kwesantya sokusebenza, kunye nobushushu obuphezulu bokusebenza.
3. Inani lemiqolo
maleko angaphezulu aguqulela kwiindleko ezongezelelekileyo ngenxa yamanyathelo emveliso ngakumbi, izinto ezingakumbi, kunye nexesha elongezelelekileyo lokuvelisa.
4. ubunzima PCB
Ukuntsonkotha PCB kuxhomekeke kwinani lamanqanaba kunye nenani vias maleko ngalunye, njengoko oku kuchaza iyantlukwano maleko apho vias ukuqala kwaye ayeke kwi, efuna lamination kunye ukubhola amanyathelo kakhulu ngakumbi kwinkqubo yokuvelisa PCB. Abavelisi bachaza inkqubo ye-lamination njengokucinezela iileya ezimbini zobhedu kunye ne-dielectrics phakathi kweeleya ezikufutshane zisebenzisa ubushushu kunye noxinzelelo lokwenza i-laminate ye-PCB eyahlukeneyo.
Ungalwenza njani uyilo lwakho?
1. Ukulandelela kunye nokushiyeka kwejiyometri kuyabiza kakhulu.
2. Ukulawulwa kwe-impedance- amanyathelo ongezelelweyo enkqubo anyusa iindleko.
3. Ubungakanani kunye nokubala kwemingxunya- imingxunya engaphezulu kunye needimitha ezincinci zokuqhuba zixabisa ngaphezulu.
4. Ii-vias eziplagiweyo okanye ezizalisiweyo kunye nokuba ingaba zibhedu- ezigqunywe ngamanyathelo enkqubo eyongezelelweyo zonyusa iindleko.
5. Ukutyeba kobhedu kumaleko- ukutyeba okuphezulu kuthetha iindleko eziphezulu.
6. Ukugqitywa komphezulu, ukusetyenziswa kwegolide kunye nobukhulu bayo- Izinto ezongezelelweyo kunye namanyathelo enkqubo anyusa iindleko.
7. Ukunyamezelana- ukunyamezelana okungaphaya kuyabiza.
Abanye oonobangela beendleko zakho.
Ezi zinto zincinci zeendleko zibandakanya udidi lwe-III zixhomekeke kuzo zombini, umenzi wezinto kunye nokusetyenziswa kwe-PCB. Zibandakanya ikakhulu:
1. ubukhulu PCB
2. Iindlela ezahlukeneyo zonyango
3. Ukuguqula imasolder
4. Ukuprinta ilivo
Iklasi yokusebenza ye-PCB (IPC Class II / III njl.
6.I-PCB contour- ngokukodwa umzila we-axis axis
7. Icala okanye icala
I-PHILIFAST iya kukunika ezona ngcebiso zilungileyo ukukunceda ukuthobele iindleko zeebhodi zePCB.